Sominex (ဆိုမီနက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sominex (ဆိုမီနက်စ်)
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sominex (ဆိုမီနက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နှာချေဆတ်ခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊မျက်ရည်ပူများကျခြင်း၊အင်ပြင်ထခြင်း၊အရေပြားအနီစက်များထွက်ခြင်း၊အခြားသောအအေးမိနှာစေး၊ဓါတ်မတည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုကုသဖို့အတွက် Sominex® ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ခရီးသွားစဉ်မူးမော်ခြင်းကိုကုသဖို့၊အိပ်ပျော်စေဖို့နဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါရဲ့အချို့သောလက္ခဏာတွေကိုကုသဖို့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအညွှန်းမှာ ဖော်ပြမထားတဲ့အခြားသောရည်ရွက်ချက်တွေအတွက်လည်းသုံးစွဲနိုင်ပါသေးတယ်။
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာထက်ပိုသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်း၊ကာလကြာရှည်ပိုသောက်ခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်ရပါဘူး။ အအေးမိနှာစေးပျောက်ဆေးတွေဆိုတာဟာကာလတိုသာသုံးစွဲရမယ့် ဆေးတွေဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ရပ်ပစ်ရပါမယ်။ အသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာဒီဆေးကိုမသုံးစွဲရပါဘူး။ ကလေးတွေအအေးမိ၊နှာစေးတာကြောင့် ဆေးတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုဦးစွာမေးမြန်းပြီးမှတိုက်ရပါမယ်။ အအေးမိနှာစေးပျောက်ဆေး၊ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုအလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာအမှားမှားအယွင်းယွင်းသုံးစွဲမိရင်အသက်အန္တရာယ်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးအိပ်အောင်ဆိုပြီးဒီဆေးကိုမတိုက်သင့်ပါဘူး။ ဆေးရည်ပုံစံကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဆေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ (ဆေးရည်ပမာဏတိုင်းဖို့အထူးစီမံထားတဲ့) အပ်ဒါမှမဟုတ်ခွက်၊ဇွန်းစတာတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုရပါမယ်။ တကယ်လို့ဒီလိုတိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေသင့်မှာမရှိဘူးဆိုရင် ဆေးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ဆီက တောင်းယူရပါမယ်။
ခရီးတောက်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် (ကားအကြာကြီးမစီးခင်၊လေယာဉ်/သင်္ဘောမစီးခင်၊ရိုလာကိုစတာလိုဟာမျိုးမစီးခင်) diphenhydramine ကိုနာရီဝက်လောက်ကြိုတင်ပြီးသုံးစွဲထားရပါမယ်။ အစာစားပြီးချိန်နဲ့အိပ်ယာဝင်ချိန်တွေမှာလည်း diphenhydramine ကိုဆက်လက်သုံးစွဲရပါမယ် (ခရီးသွားရင်းမူးမော်နိုင်မယ့်အနေအထားတွေရှိနေသေးရင်ပေါ့)။ အိပ်ပျော်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ diphenhydramine ကိုအိပ်ယာမဝင်ခင်နာရီဝက်လောက်မှာကြိုတင်သောက်သုံးရပါမယ်။ ဆေးစတင်သုံးစွဲပြီးခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိ ရောဂါလက္ခဏာတွေမသက်သာသေးရင်ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းကိုက်ဖျားနာခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊အရေပြားအနီစက်များထွက်လာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ ဒီဆေးဟာအရေပြားဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ diphenhydramine သုံးစွဲထားကြောင်းဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sominex® ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Sominex® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Sominex® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Sominex® ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sominex® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Sominex® ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေရှိနေရင်ဒီဆေးကိုသုံးစွဲသင့်ရဲ့လားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ အထူးသဖြင့် :
ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိခြင်း၊နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါရှိနေခြင်း (COPD) သို့မဟုတ်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြားသော ပြဿနာများခံစားနေရခြင်း။
ချောင်းဆိုးသလိပ်ပါခြင်း၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊အဆုတ်တွင်း လေအိတ်ငယ်များ သေးကျုံ့ပြီးကပ်ခြင်း (emphysema) သို့မဟုတ်နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်း။
ပိုတက်ဆီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများသုံးစွဲနေရခြင်း (Cytra, Epiklor, K-Lyte, K-Phos, Kaon, Klor-Con, Polycitra, Urocit-K) စတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေရင်ပေါ့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပြင်ထခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ၊လည်ချောင်းစသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုအမြန်ဆုံးခံယူပါ။
အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆေးသုံးစွဲခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။
ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Sominex (ဆိုမီနက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sominex® ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sominex (ဆိုမီနက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sominex® ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sominex (ဆိုမီနက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sominex® ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Extrapyramidal Reaction (စိတ်ရောဂါကုသရာမှာအသုံးပြုတဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ဘေးထွက်လက္ခဏာဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း) အတွက်
သောက်ဆေး : ၂၅ – ၅၀မီလီဂရမ်ကိုတနေ့၃ – ၄ကြိမ် သောက်ရပါမယ်။
ထိုးဆေး : ၁၀ – ၅၀မီလီဂရမ်ကိုအသားထိုးဆေး (အသားထိုးဆေးထိုးတဲ့အခါနက်နက်ထိုးရပါမယ်) ဒါမှမဟုတ်အကြောထိုးဆေးအဖြစ်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုရပါမယ်။ လိုအပ်လာရင်၁၀၀မီလီဂရမ်ထိ ဆေးပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
Diphenhydramine Citrate: ၇၆မီလီဂရမ်ပမာဏကို (ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ) တနေ့တကြိမ် သောက်သုံးရပါမယ်။
Diphenhydramine Hydrochloride: ၅၀မီလီဂရမ်ပမာဏကို (ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ) တနေ့တကြိမ် သောက်သုံးရပါမယ်။
သောက်ဆေး: ၂၅ – ၅၀မီလီဂရမ်ကိုတနေ့လျှင်၃ – ၄ကြိမ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုတော့ခရီးမသွားခင်မိနစ်သုံးဆယ်ကြိုပြီး သောက်ရပါမယ်။ ခရီးသွားနေစဉ်တလျှောက်လုံးအစာမစားခင်နဲ့ညမအိပ်ခင်အချိန်တွေမှာတကြိမ်စီ သောက်ပေးရပါမယ်။
Diphenhydramine Citrate: သောက်ဆေး: ၃၈ – ၇၆မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။
အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၄၅၆မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
Diphenhydramine Hydrochloride: သောက်ဆေး: ၂၅ – ၅၀မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သောက်ဆေး : ၁၂.၅ – ၂၅မီလီဂရမ်ကိုတနေ့လျှင်၃ – ၄ကြိမ်သုံးစွဲရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်၁ကီလိုတိုင်းအတွက် ဆေးပမာဏ၅မီလီဂရမ်သုံးစွဲတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၁စတုရန်းမီတာတိုင်းအတွက် ဆေးပမာဏ၁၅၀မီလီဂရမ်သုံးစွဲတဲ့ပုံစံတို့ကိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုးဆေး : ကလေးငယ်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်၁ကီလိုတိုင်းအတွက် ဆေးပမာဏ၁.၂၅မီလီဂရမ်ပမာဏကိုအသားထိုးဆေး (အသားထိုးဆေးထိုးတဲ့အခါခပ်နက်နက်ထိုးရပါမယ်)/အကြောဆေးအဖြစ်တနေ့ကို လေးကြိမ်ထိုးပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၁စတုရန်းမီတာတိုင်းအတွက် ဆေးပမာဏ၃၇.၅မီလီဂရမ်ပမာဏကိုအသားထိုးဆေး (အသားထိုးဆေးထိုးတဲ့အခါခပ်နက်နက်ထိုးရပါမယ်)/အကြောဆေးအဖြစ်တနေ့ကို လေးကြိမ်ထိုးပေးရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ဆေးစာမလိုဘဲမိမိဖာသာဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သော ဆေးပုံစံ :
အသက်၆ – ၁၂နှစ်အထိ : ၁၉ – ၃၈မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၂၂၈မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်၁၂နှစ်နဲ့အထက် : ၃၈ – ၇၆မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၄၅၆မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်၂ – ၆နှစ်အထိ : ၆.၂၅မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၇.၅မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်၆ – ၁၂နှစ်အထိ : ၁၂.၅ – ၂၅မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၁၅၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်၁၂နှစ်နဲ့အထက် : ၂၅ – ၅၀မီလီဂရမ်ကို၄ – ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့တနေ့ကို၃၀၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
Sominex (ဆိုမီနက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Sominex® (diphenhydramine) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Sominex®ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။